“Miaraha Mitomany Amin’izay Mitomany” (Romanina 12:15)
“Mifampionòna sy mifampahereza hatrany.”—1 TES. 5:11.
HIRA: 90, 111
Ahoana no ampaherezan’i Jehovah antsika?
Milazà andinin-teny mety hampahery an’ireo nidonam-pahoriana.
Inona no azon’ny fiangonana atao mba hampaherezana an’ireo nidonam-pahoriana?
1, 2. Nahoana no mila fantarintsika hoe ahoana no ampaherezana ny olona nidonam-pahoriana? (Jereo ny sary eo am-piandohan’ny lahatsoratra.)
MATY ny zanak’i Susi lahy. Hoy izy: “Nahatsiaro ho nijaly be sy nalahelo be izahay, nandritra ny herintaona teo ho eo taorian’ilay izy.” Maty tampoka koa ny vadin’ny rahalahy iray. Nilaza izy fa tsy hitany izay hilazana ny fanaintainana tsapany tamin’izay fotoana izay. Mampalahelo fa olona maro no malahelo be hoatr’izany satria maty havana. Rahalahy sy anabavy maro no tsy nanampo hoe ho faty alohan’ny Hara-magedona ny havany akaiky na ny namany. Angamba efa nisy havanao maty, na misy olona fantatrao hoe nidonam-pahoriana. Mety hieritreritra àry ianao hoe: ‘Ahoana no azo ampaherezana ny olona maty havana?’
2 Angamba ianao efa naheno olona niteny hoe afaka ho azy eny ihany ny alahelo rehefa mandeha ny fotoana. Marina ve izany? Hoy ny vehivavy iray maty vady: “Ny marina kokoa angamba dia hoe izay ataonao mandritra an’ilay fotoana no mampisinda ny alahelonao.” Mila karakaraina ny fery mba ho sitrana tsikelikely. Hoatr’izany koa ny alahelo. Mila fiahiana amim-pitiavana ilay olona malahelo, mba tsy halahelo be intsony rehefa mandeha ny fotoana. Inona àry no afaka manampy an’ireo nidonam-pahoriana?
“ANDRIAMANITRY NY FAMPIONONANA REHETRA” I JEHOVAH
3, 4. Nahoana isika no afaka matoky fa azon’i Jehovah tsara hoe mila ampaherezina ny olona nidonam-pahoriana?
3 Tena mangoraka i Jehovah, ilay Raintsika any an-danitra. Izy no tena afaka mampahery antsika. (Vakio ny 2 Korintianina 1:3, 4.) Izy koa no mahay miara-ory indrindra. Manome toky ny mpanompony izy hoe: “Izaho Ilay mampionona anareo.”—Isaia 51:12; Sal. 119:50, 52, 76.
4 Efa nidonam-pahoriana i Jehovah. Maty ny olona sasany tena tiany, anisan’izany i Abrahama, Isaka, Jakoba, Mosesy, ary Davida Mpanjaka. (Nom. 12:6-8; Mat. 22:31, 32; Asa. 13:22) Manome toky antsika ny Teniny fa tena tsy andriny izay hananganana azy ireny amin’ny maty. (Joba 14:14, 15) Ho sambatra izy ireny sady ho salama tsara. Tadidio koa fa nahita ny Zanany ‘tena tiany’ novonoina ho faty i Jehovah. (Ohab. 8:22, 30) Azo antoka hoe faran’izay nalahelo izy, ary tsy misy teny mahalaza ny alahelony.—Jaona 5:20; 10:17.
5, 6. Ahoana no ampaherezan’i Jehovah antsika?
5 Afaka matoky tanteraka isika fa hanampy antsika i Jehovah. Tsy tokony hisalasala àry isika hivavaka aminy ka hamboraka ny alahelontsika sy izay ao am-pontsika. Faly isika mahalala hoe fantatr’i Jehovah tsara ny alahelontsika, ary mampahery antsika arakaraka izay tena ilaintsika izy. Ahoana no anaovany an’izany?
6 Anisan’ny fomba anampian’Andriamanitra antsika ny “fampiononan’ny fanahy masina.” (Asa. 9:31) Tena mahery ny fanahy masina, ka afaka mampahery antsika tsara. Nilaza i Jesosy fa vonona “hanome ny fanahy masina ho an’izay mangataka aminy” ny Rainy. (Lioka 11:13) Hoy i Susi, voalaza tetsy aloha: “Imbetsaka izahay no nandohalika, dia nitalaho tamin’i Jehovah mba hampahery anay. Isaky ny nanao an’izany izahay, dia tsapanay hoe tena niaro ny fonay sy ny sainay ny fiadanan’Andriamanitra.”—Vakio ny Filipianina 4:6, 7.
MAHAZO TSARA NY ALAHELONTSIKA I JESOSY
7, 8. Nahoana isika no afaka matoky fa hampahery antsika i Jesosy?
7 Nanahaka tsara an’i Jehovah Rainy i Jesosy tamin’izy tetỳ an-tany, ka hita tamin’ny zavatra nolazainy sy nataony hoe mangoraka izy. (Jaona 5:19) Nasain’i Jehovah nampahery an’ireo “torotoro fo” sy ny “ory rehetra” izy. (Isaia 61:1, 2; Lioka 4:17-21) Fantatry ny olona àry hoe tena nangoraka izy, izany hoe nahatsapa ny fijaliana sy ny fahorian’ny olona ka te hanamaivana an’izany.—Heb. 2:17.
8 Tamin’i Jesosy mbola tanora kely angamba, dia efa nisy havany na olom-pantany maty. Mety ho anisan’izany i Josefa, ray nitaiza azy. * Azo antoka hoe mafy be taminy ny nizaka ny alahelony sy ny nahita ny fahorian’ny reniny sy ny rahalahiny ary ny anabaviny. Izy koa efa olona mora mangoraka rahateo.
9. Inona no mampiseho fa nahay niara-ory tamin’ny olona i Jesosy?
9 Tena nahazo tsara an’izay nanjo ny olona i Jesosy ary niara-ory tamin’izy ireo, nandritra ny fanompoany tetỳ an-tany. Eritrereto, ohatra, izay nitranga rehefa maty ilay namany atao hoe Lazarosy. Tsapany tsara hoe nalahelo be i Maria sy Marta. Tena nangoraka azy ireo izy ka nihetsi-po be ary nitomany mihitsy, na dia efa fantany aza hoe hanangana an’i Lazarosy amin’ny maty izy.—Jaona 11:33-36.
10. Nahoana isika no matoky fa mbola miara-ory amintsika i Jesosy hatramin’izao?
10 Nahoana no manampy antsika ny mahafantatra hoe nahay niara-ory tamin’ny olona sy nampahery azy ireo i Jesosy? Satria milaza ny Baiboly fa “i Jesosy Kristy dia tsy miova omaly sy anio ary mandrakizay.” (Heb. 13:8) Antsoina hoe “Mpitarika Lehibe Indrindra izay manome fiainana” izy. Hainy tsara hoe manao ahoana ny olona rehefa malahelo, ka “afaka manampy an’izay iharam-pitsapana” izy. (Asa. 3:15; Heb. 2:10, 18) Afaka matoky àry isika hoe mbola hontsa izy rehefa mahita olona mijaly, azony tsara ny alahelon’ilay olona, ary hampahery azy izy “amin’ny fotoana mety.”—Vakio ny Hebreo 4:15, 16.
“FAMPIONONANA AVY AO AMIN’NY SORATRA MASINA”
11. Inona ny andinin-teny tena mampahery anao?
11 Mbola be dia be andinin-teny hafa mampahery ao amin’ny Baiboly, ankoatra an’ilay fitantarana hoe nalahelo be i Jesosy tamin’i Lazarosy maty. Tsy mahagaga izany satria “izay rehetra voasoratra taloha dia nosoratana ho fianarantsika, mba hananantsika fanantenana amin’ny alalan’ny fiaretantsika sy ny fampiononana avy ao amin’ny Soratra Masina.” (Rom. 15:4) Raha malahelo ny havanao nodimandry àry ianao, dia mety hampahery anao ireto:
“Akaiky an’izay torotoro fo i Jehovah, ary mamonjy an’izay ketraka.”—Sal. 34:18, 19.
“Rehefa nihabetsaka ny tebiteby tato anatiko, dia ny fampiononanao [Jehovah] no nanafosafo ahy.”—Sal. 94:19.
“Tia antsika Andriamanitra Raintsika sady nanome antsika fampiononana mandrakizay sy fanantenana tsara, noho ny hatsaram-panahiny tsy manam-paharoa. Koa enga anie i Jesosy Kristy Tompontsika sy io Andriamanitra Raintsika io samy hampionona ny fonareo sy hampahery anareo.”—2 Tes. 2:16, 17. *
TENA MAMPAHERY NY FIANGONANA
12. Ahoana no azo ampaherezana an’ireo nidonam-pahoriana?
12 Mampahery an’ireo nidonam-pahoriana koa ny fiangonana. (Vakio ny 1 Tesalonianina 5:11.) Ahoana no azonao ampaherezana an’ireo malahelo be? (Ohab. 17:22) Tadidio hoe “misy fotoana anginana ary misy fotoana itenenana.” (Mpito. 3:7) Efa maty ny vadin’ny anabavy atao hoe Dalene. Hoy izy: “Mila milaza an’izay ao an-tsainy sy ao am-pony ny olona nidonam-pahoriana. Mila mihaino azy àry ianao dia tsy manapaka ny teniny mihitsy, satria izay no tena ilainy.” Namono tena ny anadahin’i Junia. Hoy izy: “Mety tsy ho azonao tsara ny alahelon’ny olona nidonam-pahoriana, fa ny zava-dehibe dia hoe te hahafantatra an’izay ao am-pony ianao.”
13. Inona no tokony hotadidintsika momba ny olona nidonam-pahoriana?
13 Tadidio fa tsy mitovy ny zavatra tsapan’ny olona rehefa malahelo. Samy manana ny fomba anehoany ny alahelony koa ny tsirairay. Ilay olona ihany indraindray no mahalala ny fahorian’ny fony. Mety ho sarotra aminy koa ny hanazava an’ilay izy. Hoy ny Baiboly: “Ny fon’ny olona no mahatsapa ny alahelo ao anatiny, ary tsy hisy olon-kafa tena hahatsapa ny fifaliana ao am-pon’ny olona.” (Ohab. 14:10) Ary na dia milaza an’izay ao am-pony aza izy, dia mety tsy ho mora amin’ny olon-kafa ny hahazo an’izay tiany hambara.
14. Inona no azontsika atao mba hampaherezana an’ireo nidonam-pahoriana?
14 Tsy mahagaga àry raha tsy hitantsika izay holazaina amin’ny olona nidonam-pahoriana. Milaza anefa ny Baiboly fa ‘manasitrana ny tenin’ny hendry.’ (Ohab. 12:18) Maro no nahita hevitra mampahery azo resahina, tao amin’ilay bokikely hoe Rehefa Nodimandry ny Olona Iray Tianao. * Ny mety indrindra anefa matetika, dia ny ‘miara-mitomany amin’izay mitomany.’ (Rom. 12:15) Maty ny vadin’ny anabavy atao hoe Gaby. Hoy izy: “Mitomany aho rehefa malahelo. Lasa izay no fomba ilazako izay ato am-poko. Izany no mahatonga ahy hahatsiaro ho maivamaivana rehefa misy namako miara-mitomany amiko. Mba tsy izaho irery amin’izay no mizaka ny alaheloko.”
15. Inona no azonao atao raha sarotra aminao ny hiresaka mivantana amin’ny olona nidonam-pahoriana? (Jereo koa ilay hoe “ Teny Vitsivitsy Mampahery.”)
15 Ahoana raha te hampahery an’ilay olona ianao, nefa sarotra aminao ny hiresaka mivantana aminy? Mety ho mora kokoa ny manoratra karta na taratasy, na mandefa e-mail na SMS. Afaka manoratra andinin-teny mampahery fotsiny, ohatra, ianao na mampahatsiahy ny toetra tsara nampiavaka an’ilay olona nodimandry na zavatra hafa nahafinaritra ahatsiarovanao azy. Hoy i Junia: “Tena faly aho rehefa mahazo hafatra kely mampahery, na misy mpiara-manompo manasa ahy hiaraka aminy. Lasa mahatsapa aho hoe mba misy miraharaha ahy sy tia ahy.”
16. Inona no tena mampahery an’ireo nidonam-pahoriana?
16 Tena tsara koa ny mivavaka ho an’ny rahalahy na anabavy nidonam-pahoriana, na miara-mivavaka aminy. Marina fa mety hihetsi-po be ianao, ka tsy ho hitanao izay holazaina rehefa mivavaka. Tsara anefa ny mitalaho amin’ny fo manontolo amin’i Jehovah, na dia mety hitomany aza ianao na hangovitra ny feonao. Mety hampahery be azy izany. Hoy i Dalene: “Rehefa misy rahavavy tonga mampahery ahy indraindray, dia asaiko mivavaka ry zareo raha mety. Miakanakana ry zareo matetika rehefa manomboka mivavaka. Rehefa avy milaza fehezanteny vitsivitsy anefa izy, dia lasa mety tsara ny feony, dia mivavaka amin’ny fo manontolo izy. Vao mainka aho matoky an’i Jehovah rehefa mahita hoe manana finoana matanjaka izy ireo ary be fitiavana sady mitady izay hahasoa ahy.”
MIEZAHA FOANA HAMPAHERY
17-19. Nahoana isika no tokony ho vonona hampahery foana an’ireo nidonam-pahoriana?
17 Mety ho vetivety ny olona sasany dia tsy malahelo be intsony, fa ny sasany mety ho elaela. Amin’ny voalohany ihany matetika no mampahery an’ireo nidonam-pahoriana ny havany sy ny namany, fa variana amin’ny fiainana andavanandro izy ireo avy eo. Isika kosa tokony hanampy azy ireo foana, satria mbola mila ampaherezina izy ireo. “Tia amin’ny fotoana rehetra” mantsy “ny tena namana, sady toy ny rahalahy natao hanampy amin’ny fotoam-pahoriana.” (Ohab. 17:17) Tokony hampahery an’ilay nidonam-pahoriana foana isika mpiara-manompo aminy, na hafiriana na hafiriana izy no malahelo.—Vakio ny 1 Tesalonianina 3:7.
18 Tadidio fa misy fotoana mety hahatonga an’ilay olona halahelo be, ohatra hoe amin’ny vanin-taona sasany na rehefa misy daty miavaka mitsingerina. Mety ho hira, na sary, na fofona, na feo koa no hahatonga azy halahelo, na rehefa misy zavatra sasany ataony. Mety halahelo be koa izy amin’ny voalohany rehefa izy irery sisa no manao ny zavatra fanaon’izy sy ilay havany nodimandry, ohatra hoe mamonjy fivoriambe na Fahatsiarovana. Nieritreritra ny rahalahy iray hoe tena ho mafy aminy rehefa hitsingerina ny datin’ny mariaziny, ny taona voalohany taorian’ny nahafatesan’ny vadiny. Nalahelo be tokoa izy tamin’io andro io. Hoy anefa izy: “Nisy rahalahy sy anabavy nandamina fiaraha-mikorana kely tamin’izay. Dia nasainy izaho sy ny namako akaiky vitsivitsy, amin’izay aho mba tsy irery.”
19 Tadidio anefa fa tsy amin’ny fotoana manokana ihany ny olona nidonam-pahoriana no mila fampaherezana. Hoy i Junia: “Tena mampahery matetika rehefa misy olona mba miaraka aminao na manampy anao koa amin’ny fotoana hafa. Tena manampy be ireny fiarahana tampotampoka ireny.” Marina aloha fa tsy hahavita hanafoana tanteraka ny alahelon’ilay olona isika. Tsy hoe rehefa manampy azy koa isika, dia tsy hahatsiaro ho manirery intsony izy. Hanamaivamaivana ny alahelony anefa isika raha manao zavatra ho azy. (1 Jaona 3:18) Hoy i Gaby: “Tena misaotra an’i Jehovah aho fa nisy anti-panahy be fitiavana foana nanampy ahy isaky ny nanana olana aho. Lasa tsapako hoe tia ahy i Jehovah ary hoatran’ny hoe namihina ahy mihitsy izy.”
20. Nahoana no mampahery ny zavatra ampanantenain’i Jehovah?
20 Mampahery antsika ny mahalala fa ho foana ny alahelo rehetra rehefa hanangana ny maty i Jehovah, ilay Andriamanitry ny fampiononana. Handre ny feon’i Kristy ny olona rehetra any am-pasana amin’izay, ka hivoaka. (Jaona 5:28, 29) Mampanantena i Jehovah hoe ‘hofoanany tsy hisy mandrakizay ny fahafatesana, ary hofafany ny ranomaso amin’ny tarehy rehetra.’ (Isaia 25:8) Tsy ‘hiara-hitomany amin’izay mitomany’ intsony ny mponina eto an-tany amin’izay, fa ‘hiara-hifaly amin’izay mifaly.’—Rom. 12:15.
^ feh. 8 Tamin’i Jesosy 12 taona no miresaka farany an’i Josefa ny Baiboly. Efa tsy misy resaka an’i Josefa intsony ao amin’ilay fitantarana momba ny fahagagana voalohany nataon’i Jesosy, izany hoe tamin’izy nanova ny rano ho divay. Tsy misy resaka momba azy intsony koa aorian’izay. Tamin’i Jesosy teo amin’ny hazo fijaliana koa, dia ny apostoly Jaona no nasain’i Jesosy nikarakara an’i Maria. Azo inoana fa tsy ho nanao an’izany izy raha mbola velona i Josefa.—Jaona 19:26, 27.
^ feh. 11 Ireto koa misy andinin-teny hafa hitan’ny olona maro hoe mampahery: Salamo 20:1, 2; 31:7; 38:8, 9, 15; 55:22; 121:1, 2; Isaia 57:15; 66:13; Filipianina 4:13; 1 Petera 5:7.
^ feh. 14 Jereo koa ilay hoe “Ampaherezo Ireo Nidonam-pahoriana”, ao amin’ny Tilikambo Fiambenana 1 Novambra 2010.
Teny Vitsivitsy Mampahery
Ireto misy teny mampahery nosoratan’ny mpiara-manompo ho an’ny namany nidonam-pahoriana:
“Tsy hitanay izay holazaina, sady tsy tena mahafantatra an’izay tsapanareo izahay. Tena tianay anefa ianareo. I Jehovah no tena mahalala an’izay any am-ponareo, dia azo antoka fa efa mampahery anareo izy ary mbola hampahery anareo foana. Enga anie mba hanampy anareo ny vavaka ataonay.”
“Enga anie i Jehovah hanohana anareo amin’izao fahoriana mafy manjo anareo izao.”
“Matokia fa tadidin’Andriamanitra ny tsipiriany rehetra momba an’ilay havanareo, ary hatsangany indray izy. Mino izahay fa hampahery anareo izany.”
“Hotsaroantsika foana ny finoany, mandra-pahitantsika azy indray any amin’ny Paradisa, rehefa ho velona soa aman-tsara izy.”
“Tena mafy ny mamoy havana hoatr’izao, ka tsy hita izay teny hilazana ny alahelo. Tsy ho hitantsika indray anefa izay teny hilazana ny hafaliantsika, rehefa hatsangan’ilay Raintsika any an-danitra izy, ka ho tafaraka indray ianareo. Efa tsy andrintsika izany fotoana izany!”